कोरोना संक्रमणबाट थप ९ जनाकाे मृत्यु, मृतक कहाँ-कहाँको ? - Arthasansar
कोरोना संक्रमणबाट थप ९ जनाकाे मृत्यु, मृतक कहाँ-कहाँको ?
आइतबार, २१ भदौ २०७७, १६ : ४१ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरसकाे संक्रमणबाट थप ९ जनाकाे मृत्यु भएको जानकारी दिएकाे छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसकाे संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ८९ जना पुगेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा आज आयोजना गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गाैतमले पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसकाे संक्रमणबाट थप ९ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन् । जसमध्ये २ जना महिला र ७ जना पुरूष हुन् ।
मृत्यु हुनेमा मोरङका ६४ वर्षीया र झापाका ४५ वर्षीया महिला तथा मोरङका ४५ वर्षीय, पर्साका ७७ वर्षीय, धनुषाका ३५ वर्षीय, चितवनका ७० वर्षीय र काठमाडौँका ७४, ६८ र ८५ वर्षीय पुरूष रहेका छन् ।